Falcelinta Kiimikada Miisaanka leh | ZnS (zinc sulfide) Sida Walxaha Alaabta
Falcelinta Kiimikada Waxay Leedahay ZnS (zinc sulfide) Walaxda Alaabta
Isla'egyada kiimikaad ee dheellitiran ee alaabada waxaa ku jira ZnS
10-ka falcelin kiimikaad ee ugu sarreeya (isla'egaanta dheellitiran) ee leh ZnS sida walaxda wax soo saarka, lagu qiimeeyay mugga raadinta
ZnSO4 + BaS → ZnS + BASO4 S + Zn → ZnS K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4 SO2 + 3Zn → 2ZnO + ZnS Na2S + ZnCl2 → NaCl + ZnS Na2S + Zn (MAYA3)2 → 2NaNO3 + ZnS Na2S + ZnSO4 . Na2SO4 + ZnS ZnSO4 + BaS → ZnS + BASO4 Kharashka + ZnCl2 → FeCl2 + ZnS
10ka sare ee isku dheeli tiran ee falcelinta kiimikada ee leh ZnS sida walaxda alaabta
Ma aanan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelinta isku-dhafka ah iyo sidoo kale waxay leedahay ZnS (zinc sulfide) sida walxaha wax soo saarka.
10ka ugu sarreeya falcelinta Burburinta kiimikaad ee dheellitiran oo leh ZnS sida walaxda alaabta
Ma aanan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelinta Burburka oo sidoo kale leh ZnS (zinc sulfide) sida walxaha wax soo saarka.
10-ka sare ee kiimikaad isku dheeli tiran ee falcelinta Oxidation-yaraynta ee leh ZnS sida walaxda alaabta
Waxaan helnay ugu yaraan 1 falcelin kiimikaad oo dheellitiran oo leh ZnS (zinc sulfide) sida walxaha wax soo saarka
10ka sare ee kiimikaad isku dheeli tiran ee falcelinta hal beddelka ah ee leh ZnS sida walaxda alaabta
Ma aanan helin wax isle'eg kiimikaad ah oo loo kala saaray falcelin hal-bedel ah oo sidoo kale leh ZnS (zinc sulfide) sida walxaha wax soo saarka.
10ka sare ee isku dheeli tiran ee kiimiko ah falcelinta laba-badal ee leh ZnS sida walaxda alaabta